Olee Otú Ị Ga-esi Na-erite Uru n’Ihe Niile Jehova Na-enye Anyị?
“Mụ onwe m, Jehova, bụ Chineke gị, Onye na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru.”—AỊZA. 48:17.
ABỤ: 117, 114
Gịnị nwere ike ime ka anyị ghara irite uru n’ụfọdụ n’ime ihe Jehova ji akụziri anyị ihe?
Olee aro ụfọdụ nwere ike inyere anyị aka irite uru n’ebe niile anyị gụrụ na Baịbụl?
Olee otú anyị nwere ike isi rite uru ma anyị na-amụ akwụkwọ anyị e bipụtara maka ndị na-eto eto nakwa maka ọhaneze?
1, 2. (a) Olee otú Ndịàmà Jehova si were Baịbụl? (b) Olee ebe kacha amasị gị na Baịbụl?
NDỊÀMÀ JEHOVA ejighị Baịbụl egwu egwu. Ọ na-enye anyị ntụziaka anyị ga-atụkwasịli obi. Ọ na-akasi anyị obi, na-emekwa ka anyị nwee olileanya. (Rom 15:4) Ihe e dere na Baịbụl abụghị echiche ụmụ mmadụ, kama n’eziokwu, ọ bụ “okwu Chineke.”—1 Tesa. 2:13.
2 O doro anya na anyị niile nwere amaokwu Baịbụl na-akacha amasị anyị. Akwụkwọ Matiu, Mak, Luk, na Jọn na-akacha amasị ụfọdụ ndị n’ihi na ha kọwara otú Jizọs si gosi ọmarịcha àgwà ndị Jehova nwere. (Jọn 14:9) E nwekwara ndị ebe na-akacha atọ ha ụtọ bụ akwụkwọ Baịbụl ndị kwuru banyere ihe ga-eme n’ọdịnihu. O nwere ike ịbụ akwụkwọ Mkpughe, n’ihi na ọ kọwara “ihe ndị na-aghaghị ime n’oge na-adịghị anya.” (Mkpu. 1:1) È nwere onye n’ime anyị akwụkwọ Abụ Ọma na-akasitụbeghị obi ma ọ bụ onye na-amụtatụbeghị ihe bara uru n’akwụkwọ Ilu? N’eziokwu, Baịbụl bụ akwụkwọ e dere maka mmadụ niile.
3, 4. (a) Olee otú obi na-adị anyị maka akwụkwọ anyị dị́ iche iche? (b) Olee akwụkwọ ndị e bu ụfọdụ ndị n’obi bipụta?
3 Ebe ọ bụ na anyị ejighị Baịbụl egwu egwu, anyị jikwa akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl kpọrọ ihe. Dị ka ihe atụ, obi na-adị anyị ụtọ maka ọtụtụ ihe a na-akụziri anyị n’akwụkwọ, broshọ, magazin, nakwa n’ihe ndị ọzọ. Anyị ma na ihe ndị a Jehova na-enye anyị na-eme ka okwukwe anyị sie ike, anyị na ya adịkwa ná mma.—Taị. 2:2.
4 E wezụga akwụkwọ e bipụtara maka anyị niile bụ́ Ndịàmà Jehova, anyị na-enwetakwa akwụkwọ ndị e bu ụfọdụ ndị n’obi bipụta. E nwere ndị e bipụtara iji nyere ndị na-eto eto aka, nweekwa ndị nke e biri iji nyere ndị nne na nna aka. E nwere ọtụtụ isiokwu na vidio ndị dị́ n’adres Ịntanet anyị e wepụtara maka ndị na-abụghị Ndịàmà Jehova. Ọtụtụ ihe e ji akụziri anyị Okwu Chineke na-echetara anyị na Jehova emezuola nkwa o kwere na ya “ga-emere ndị niile oké oriri.”—Aịza. 25:6.
5. Olee ihe obi kwesịrị isi anyị ike na ọ na-eme Jehova obi ụtọ?
5 O nwere ike ịna-adị ọtụtụ n’ime anyị ka ya bụrụ na anyị nwekwuru oge anyị ga na-eji agụ Baịbụl na akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl. Obi kwesịrị isi anyị ike na obi na-adị Jehova ụtọ ma anyị na-ewepụta oge na-agụchi Baịbụl anya, na-amụkwa ihe. (Efe. 5:15, 16) O nwere ike ịbụ na mgbe ụfọdụ, awa ole anyị wepụtara maka ịmụ otu akwụkwọ e bipụtaara anyị ga-adị iche n’oge anyị ji amụ akwụkwọ ọzọ. Ma, e nwere ihe anyị kwesịrị ịkpachara anya ka anyị zere. Gịnị ka ọ bụ?
6. Olee ihe nwere ike ime ka anyị ghara irite uru anyị kwesịrị irite n’ụfọdụ n’ime ihe Jehova na-enye anyị?
6 Ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya, anyị nwere ike ịna-eche na ebe ụfọdụ na Baịbụl ma ọ bụ akwụkwọ anyị ụfọdụ agbasaghị anyị. Dị ka ihe atụ, gịnị ka anyị ga-eme ma ọ dị́ anyị ka ebe anyị gụrụ na Baịbụl agbasaghị anyị? Ọ́ bụrụkwanụ na anyị esoghị ná ndị e bu n’obi dee otu akwụkwọ? Ànyị na-agụ ya elu elu ma ọ bụdị leghara ya anya? Anyị mee otú ahụ, anyị agaghị amụta ihe bara ezigbo uru anyị gaara amụta. Gịnị ka anyị ga-eme ka ụdị ihe a ghara ime anyị? Ihe kacha mkpa bụ na onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị ịna-echeta na ọ bụ Chineke na-enye anyị ihe ndị a e ji akụziri anyị ihe. O si n’ọnụ Aịzaya onye amụma sị: “Mụ onwe m, Jehova, bụ Chineke gị, Onye na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru.” (Aịza. 48:17) N’isiokwu a, anyị ga-eleba anya n’aro atọ ga-enyere anyị aka irite uru n’ebe ọ bụla anyị gụrụ na Baịbụl nakwa n’ihe niile Jehova ji akụziri anyị Okwu ya.
ARO NDỊ GA-EME KA ỊGỤ BAỊBỤL BAARA ANYỊ URU
7. Anyị gụwa Baịbụl, gịnị mere anyị ji kwesị iburu n’obi na e nwere ihe anyị ga-amụta?
7 Buru n’obi na e nwere ihe ị ga-amụta. Baịbụl kwuru hoo haa na ‘Akwụkwọ Nsọ dum si n’ike mmụọ nsọ Chineke, baakwa uru.’ (2 Tim. 3:16) N’eziokwu, e nwere onye ma ọ bụ ndị e bu n’obi dee ebe ụfọdụ na Baịbụl. N’ihi ya, anyị gụwa Baịbụl, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ka anyị mụta ihe n’ebe anyị na-agụ. Otu nwanna kwuru, sị: “M gụwa Baịbụl, m na-agbalị icheta na e nwere ike inwe ọtụtụ ihe e kwesịrị ịmụta n’ebe m na-agụ.” Ọ sịkwara: “Ihe a m na-echeta na-eme ka m mụta ihe mmadụ na-agaghị amụta ozugbo ọ gụrụ ya.” Tupu anyị agụwa Okwu Chineke, anyị kwesịrị ịrịọ Jehova ka o mee ka anyị mata na e nwere ihe anyị ga-amụta nakwa ka o nye anyị amamihe ka anyị nwee ike ịghọta ihe ọ chọrọ ka anyị mụta.—Ezra 7:10; gụọ Jems 1:5.
Ị̀ na-amụta ihe niile i kwesịrị ịmụta n’ọgụgụ Baịbụl gị? (A ga-akọwa ya na paragraf nke 7)
8, 9. (a) Mgbe anyị na-agụ Baịbụl, olee ajụjụ ndị anyị nwere ike ịjụ onwe anyị? (b) Gịnị ka àgwà ndị ahụ ndị okenye kwesịrị inwe na-akụziri anyị banyere Jehova?
8 Na-ajụ ajụjụ. Ị gụwa Baịbụl, kwụsịtụ jụọ onwe gị, sị: ‘Gịnị ka ihe a na-akụziri m banyere Jehova? Olee otú m ga-esi mee ya? Olee otú m ga-esi jiri ya nyere ndị ọzọ aka?’ Anyị chebara ụdị ajụjụ ndị a echiche, anyị ga-amụtakwu ihe n’ebe anyị gụrụ na Baịbụl. Dị ka ihe atụ, chegodị banyere àgwà ndị Baịbụl kwuru ọ ga-abụ mmadụ na-akpa, ya eruo eruo ịbụ okenye. (Gụọ 1 Timoti 3:2-7.) Ebe ọ bụ na ọtụtụ n’ime anyị abụghị okenye, anyị nwere ike iche na ebe a agbasachaghị anyị. Ma, ka anyị jiri ajụjụ ndị ahụ a jụrụ na mbụ hụ otú àgwà ndị ahụ e kwuru okwu ha nwere ike isi nyere anyị niile aka.
9 Gịnị ka ihe a na-akụziri m banyere Jehova? Àgwà ndị ahụ Jehova mere ka e dee na-eme ka anyị mata na e nwere àgwà ndị magburu onwe ha ọ chọrọ ka ndị okenye ọgbakọ na-akpa. Ọ chọrọ ka ndị okenye bụrụ ndị ndị ọzọ ga na-eṅomi. Ọ ga-ajụkwa ha ajụjụ maka otú ha si emeso ọgbakọ ya, “nke o ji ọbara Ọkpara ya zụta.” (Ọrụ 20:28) Jehova chọrọ ka obi ruo anyị ala n’ihi otú ndị ọzụzụ atụrụ nọ́ n’okpuru ya si elekọta anyị. (Aịza. 32:1, 2) N’ihi ya, àgwà ndị ahụ ndị okenye kwesịrị inwe na-echetara anyị na Jehova hụrụ anyị n’anya nke ukwuu.
10, 11. (a) Anyị gụwa ebe e dere àgwà ndị okenye kwesịrị ịna-akpa, olee otú anyị nwere ike isi na-eme ihe ahụ anyị na-agụ? (b) Olee otú anyị ga-esi jiri ya nyere ndị ọzọ aka?
10 Olee otú m ga-esi mee ya? Okenye kwesịrị ịna-eme, ya nọtụ, ya ajụọ onwe ya ma ọ̀ ka nwere àgwà ndị ahụ Baịbụl kwuru okwu ha, iji mata ma è nwere ebe ndị o kwesịrị imekwu nke ọma. Nwanna nwoke nke “na-agbalị ka o ruo eru ịbụ onye nlekọta” kwesịrị ịna-echebara àgwà ndị ahụ echiche n’ihi na o kwesịrị ịgba mbọ na-akpa ha otú ike ya hà. (1 Tim. 3:1) Nke bụ́ eziokwu bụ na Onye Kraịst ọ bụla nwere ike ịmụta ihe n’àgwà ndị ahụ e dere n’amaokwu ndị ahụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ n’ime ha bụ ihe Jehova chọrọ ka Ndị Kraịst niile na-eme. Dị ka ihe atụ, anyị niile kwesịrị inwe ezi uche na uche zuru okè. (Fil. 4:5; 1 Pita 4:7) Ka ndị okenye na-agbalị ka ha ghọọrọ “ìgwè atụrụ ahụ ihe nlereanya,” anyị nwere ike ịmụta ihe n’aka ha ma ‘na-eṅomi okwukwe ha.’—1 Pita 5:3; Hib. 13:7.
11 Olee otú m ga-esi jiri ya nyere ndị ọzọ aka? Anyị nwere ike iji àgwà ndị ahụ ndị okenye kwesịrị ịna-akpa nyere ndị nwere mmasị ma ọ bụ ndị anyị na-amụrụ Baịbụl aka ịghọta na ndị okenye nọ́ n’ọgbakọ Ndịàmà Jehova dị iche ná ndị ụkọchukwu Krisendọm. Ka anyị na-agụ ebe e dere àgwà ndị ahụ, anyị nwekwara ike icheta otú ndị okenye ọgbakọ anyị si agbara anyị mbọ. Iche banyere otú ha si agba mbọ ga-eme ka anyị ‘na-akwanyere ha ùgwù’ n’ihi na ‘ha na-arụsi ọrụ ike n’etiti anyị.’ (1 Tesa. 5:12) Ọ bụrụ na anyị ejiri obi anyị niile na-akwanyere ha ùgwù, anyị ga-eme ka ha na-enwekwu ọṅụ.—Hib. 13:17.
12, 13. (a) Olee ụdị nchọnchọ anyị nwere ike iji akwụkwọ ndị e ji eme nchọnchọ mee? (b) Nye ihe atụ na-egosi otú ịmata ihe ụfọdụ nwere ike isi mee ka anyị mụta ihe mmadụ na-agaghị amụta ozugbo ọ gụrụ ihe.
12 Na-eme nchọnchọ. Mgbe anyị na-amụ Baịbụl, anyị nwere ike iji akwụkwọ ndị e ji eme nchọnchọ lee ma ànyị ga-azali ajụjụ ndị a:
Ònye dere ebe a m na-agụ na Baịbụl?
Olee ebe a nọ dee ya na mgbe e dere ya?
Olee ihe ndị dị́ mkpa mere mgbe e dere akwụkwọ Baịbụl a?
Ịmata ụdị ihe ndị a nwere ike ime ka anyị mụta ihe mmadụ na-agaghị amụta ozugbo ọ gụrụ ya.
13 Dị ka ihe atụ, Ezikiel 14:13, 14 kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ala emehie m site n’ime omume ekwesịghị ntụkwasị obi, m ga-esetị aka m mee ya ihe, gbajisịa mkpara o ji ekonye achịcha, m ga-emekwa ka o nwee ụnwụ, bipụkwa mmadụ na anụ ụlọ na ya. ‘Ọ bụrụgodị na ndị ikom atọ a, Noa, Daniel na Job, nọ n’ime ya, ha ga-anapụta mkpụrụ obi nke ha n’ihi ezi omume ha,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.” Anyị mee nchọnchọ, anyị ga-amata na Ezikiel dere ihe a n’ihe dị́ ka afọ 612 Tupu Oge Ndị Kraịst. N’oge ahụ, Noa na Job anwụọla kemgbe ọtụtụ narị afọ, Chineke ana-echetakwa otú ha si kwesị ntụkwasị obi. Ma, Daniel ka nọ ndụ mgbe ahụ. N’eziokwu, o nwere ike ịbụ na ọ dị ihe dị́ ka afọ iri na asatọ ma ọ bụ iri afọ abụọ na atọ mgbe Jehova kwuru na ọ bụ onye ezi omume otú ahụ Noa na Job bụ. Gịnị ka ihe a na-akụziri anyị? Jehova na-ahụ ndị niile jí obi ha dum na-efe ya, o jikwa ha kpọrọ ihe, ma ndị ka na-eto eto.—Ọma 148:12-14.
GBALỊA KA Ị NA-ERITE URU N’AKWỤKWỌ DỊ́ ICHE ICHE A NA-EBIPỤTARA ANYỊ
14. Olee otú akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto si enyere ha aka, oleekwa otú ọ ga-esi baara ndị ọzọ uru? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
14 Akwụkwọ niile a na-ebipụtara anyị nwere ike ịbara anyị uru otú ahụ ịmụ ebe niile n’Okwu Chineke na-abara anyị uru. Ka anyị leba anya n’ụfọdụ n’ime ha. Akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, e bipụtala ọtụtụ akwụkwọ maka ndị na-eto eto.  E biri ụfọdụ n’ime ha iji nyere ha aka imeri nsogbu ndị ọgbọ ha na-enye ha n’ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ihe ndị na-esiri ha ike mgbe ha na-eto. Olee otú ịgụ akwụkwọ ndị ahụ nwere ike isi baara anyị niile uru? Ịgụ ha ga-eme ka anyị cheta ihe ya na ndị na-eto eto nọ́ n’ọgbakọ na-alụ. Ọ ga-eme ka anyị nwee ike ịna-enyere ha aka ma na-agba ha ume.
15. Gịnị mere Ndị Kraịst torola eto ji kwesị inwe mmasị n’akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto?
15 Ọ bụghị naanị ndị na-eto eto na-enwe ọtụtụ n’ime nsogbu ndị a na-ekwu banyere ha n’akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto. Anyị niile kwesịrị ịna-agbachitere ihe anyị kweere, ịna-ejide onwe anyị, na ịna-ezere mkpakọrịta ọjọọ na ntụrụndụ na-adịghị mma. Anyị ekwesịghịkwa ikwe ka ndị ọzọ mee ka anyị mee ihe na-adịghị mma. A na-ekwu banyere ihe ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ n’akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto. Ndị Kraịst torola eto hà kwesịrị iche na ha etofeela ịgụ akwụkwọ ndị e bipụtara maka ndị na-eto eto? Mbanụ. Ọ bụ eziokwu na a na-ede akwụkwọ ndị ahụ otú ga-amasị ndị na-eto eto, ihe ndị e kwuru na ha si n’Okwu Chineke na-anaghị agbanwe agbanwe. Anyị niile nwekwara ike irite uru n’ihe ndị ahụ Jehova ji akụziri anyị ihe.
16. Olee ihe ọzọ akwụkwọ anyị na-enyere ndị na-eto eto aka ime?
16 E wezụga inyere ndị na-eto eto aka ná nsogbu ndị ha na-enwe, akwụkwọ anyị na-enyekwara ha aka ka okwukwe ha sie ike, ha na Jehova adịkwuo ná mma. (Gụọ Ekliziastis 12:1, 13.) O nwekwara ike ịbara Ndị Kraịst torola eto uru. Dị ka ihe atụ, otu n’ime isiokwu ndị gbara na Teta! April 2009 bụ “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị . . . Olee Ihe M Nwere Ike Ime Ka Ịgụ Baịbụl Na-atọ M Ụtọ?” A tụrụ aro ụfọdụ n’isiokwu ahụ, nweekwa igbe e nwere ike ịchakapụta tinye na Baịbụl maka iji na-amụ ihe. Ndị torola eto hà so ná ndị isiokwu ahụ baara uru? Otu nwanna nwaanyị, nke lụrụla di ma mụta ụmụ, dere, sị: “Ịgụ Baịbụl kwa ụbọchị nọ na-esiri m ike. Ebuuru m aro ndị a tụrụ n’isiokwu ahụ n’obi, jirikwa ebe ahụ e kwuru ka a chakapụta na-agụ Baịbụl. Ugbu a, m na-atụzi anya oge m ji agụ Baịbụl. Ahụla m otú akwụkwọ Baịbụl dị́ iche iche si na-ekwu otu ihe ma yie ọmarịcha ákwà nwere àgwà dị́ iche iche. Ịgụ Baịbụl atọtụbeghị m ụtọ otú a.”
17, 18. Olee uru anyị ga-erite ma anyị na-agụ akwụkwọ anyị ndị e bipụtara maka ọhaneze? Nye ihe atụ.
17 Akwụkwọ e bipụtara maka ọhaneze. Kemgbe afọ 2008, obi dị anyị ụtọ na a na-ebipụta Ụlọ Nche nke a na-amụ amụ, nke bụ́ maka Ndịàmà Jehova. Ma anyị nwekwara Ụlọ Nche a na-ebipụta maka ọhaneze. Olee otú ịgụ ya ga-esi baara anyị uru? Chegodị banyere ihe atụ a. Ka e were ya na otu ụbọchị, tupu a malite ikwu okwu ihu ọha, ị chọpụtara na e nwere onye ị gwara ka ọ bịa ọmụmụ ihe, ya abịa. O doro anya na obi ga-atọ gị ụtọ. Mgbe a nọ na-ekwu okwu ihu ọha, gị ana-eche banyere onye ahụ. Ị na-eche otú ihe ọ na-anụ dị ya na otú ọ ga-esi baara ya uru. Ọ ga-eme ka ị mata uru okwu ahụ bara, meekwa ka obi dịkwuo gị ụtọ maka ya.
18 Ụdị ihe ahụ ga-emekwa mgbe anyị na-agụ akwụkwọ e bipụtara maka ọhaneze. Dị ka ihe atụ, a na-ede isiokwu ndị dị́ n’Ụlọ Nche ọhaneze otú ọ ga-adịrị onye na-abụghị Onyeàmà Jehova mfe ịghọta ya. A na-esikwa otú ahụ ede ọtụtụ isiokwu ndị dị́ n’adres Ịntanet anyị bụ́ jw.org/ig, dị́ ka isiokwu ndị dị́ ná nkebi bụ́ “Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara” na “Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Banyere Ndịàmà Jehova.” Ịgụ isiokwu ndị ahụ ga-eme ka anyị jiri eziokwu Baịbụl ndị anyị mabu kpọrọkwuo ihe. O nwekwara ike ime ka anyị mụta ụzọ ndị ọhụrụ anyị ga-esi na-akọwara ndị ọzọ ihe anyị kweere ma anyị gaa ozi ọma. Otú ahụkwa ka Teta! na-eme ka obi sikwuo anyị ike na ezi Chineke dị, na-akụzikwara anyị otú anyị ga-esi na-agbachitere ihe anyị kweere.—Gụọ 1 Pita 3:15.
19. Olee otú anyị ga-esi gosi Jehova na obi dị anyị ụtọ maka ihe niile ọ na-enye anyị?
19 O doro anya na Jehova enyela anyị ọtụtụ ndụmọdụ na ntụziaka ga-abara anyị uru. (Mat. 5:3) Ka anyị na-agụ akwụkwọ niile ọ na-enye anyị ma na-eme ihe anyị na-amụta. Anyị mee otú ahụ, anyị na-egosi Jehova na obi dị anyị ụtọ maka ihe niile ọ na-enye anyị.—Aịza. 48:17.
^  (paragraf nke 14) Ụfọdụ n’ime akwụkwọ ndị ahụ bụ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 1 na Nke 2, nakwa isiokwu bụ́ “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị,” nke na-adịzi naanị n’adres Ịntanet anyị.
mailto:?body=Na-erite Uru n’Ihe Niile Jehova Na-enye Anyị%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2016364%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Na-erite Uru n’Ihe Niile Jehova Na-enye Anyị